Data Analytics ဆိုသညျမှာ
Data Analytics ပဲဖွဈဖွဈ၊ Data Science ပဲ ဖွဈပါစေ "ဆယျစုနှဈ (နှဈ) ခုလောကျ" ဖွတျကြျောခဲ့ရပွီဖွဈလို့ Data ကောကျခံခွငျးနဲ့ စိစဈတှကျထုတျခွငျးနညျးစနဈမြား၊ Software မြား၊ Application မြား တရှိနျထိုး တိုးတကျလာခဲ့ပါပွီ။
Data Analytics ဆိုတာဟာ စီးပှားရေးရညျရှယျခကျြ (တိုးခြဲ့၊ ရပျတညျ)၊ သိပ်ပံပညာအခကျြအလကျမြားစုစညျးလိုသညျ့ရညျရှယျခကျြဖွငျ့ "အခကျြအလကျကောကျခံစီစဈထုတျနုတျခွငျး" ဖွဈသညျ။ ၂၁ ရာစုနှဈမှာတော့ Data Analytics အလုပျကို သင်ျခြာပညာရှငျမြား၊ အငျဂြီနီယာပညာရှငျမြား၊ စာရငျးကိုငျမြားနဲ့ ကှနျပြူတာသိပ်ပံပညာရှငျတို့ ပိုမိုဝငျရောကျလုပျကိုငျနကွေပါပွီ။
ကောကျယူထားတဲ့ အခကျြအလကျ Data မြားပျေါမူတညျပွီး Decision မြာခခြွငျး၊ ပွသနာမြားဖွရှေငျးခွငျး၊၊ အဖွတှေကျထုတျခွငျးမြား အစရှိသဖွငျ့ အထောကျအပံ့ပေးနိုငျတဲ့ ဘာသာရပျတဈခုဖွဈတာကွောငျ့ ဒီနခေ့တျေမှာ ပိုမိုခတျေစားလာတာကို တှရေ့ပါတယျ။
Data Analytics ပွုလုပျရာတှေ ထိုပညာရှငျမြားမှာ သူတို့နယျပယျဆိုငျရာ Analytics Tools မြားကိုသာ အသုံးပွုတတျကွသညျ။ ဒါကွောငျ့ အနာဂတျအလုပျအကိုငျရညျမှနျးခကျြဖွငျ့ အခုခတျေလူငယျတို့ Data Analytics သငျတနျးမြားကို ကွိုတငျတကျရောကျလလေ့ာထားသငျ့နပေါပွီ။
Data Analysis လို့ဆိုတာနဲ့ အခွခေံအားဖွငျ့
(4) Data Modeling
(5) Data Wrangling
(8) Machine Learning
(9) Deep Learning
(10) Supervised Learning
(11) Unsupervised Learning
(12) Reinforcement Learning ဆိုတာတှကေို အရငျဆုံး နားလညျထားဖို့လိုအပျပါတယျ။
Structured data တှေ ဖွဈပွီး analysisလုပျရာမှာ အသုံးပွုနိုငျအောငျ စီစဉျထားရှိထားတဲ့ data collection setတှဖွေဈပါတယျ။
Data Scientistတှလေုပျလရှေိ့တဲ့ Data set တှထေဲကနေ အသုံးပွုလိုရလောကျမယျ့ usable modelsတှေ ရှာဖှခွေငျး processတဈခုပဲဖွဈပါတယျ။အဲ့အတှကျလဲ techniques အမြိုးမြိုးကိုသုံးပါတယျ။eg. Regression, Classification, Cluster Analysis , Outlier Analysis...
ရရှိထားတဲ့Dataနဲ့ Informationတှကေို Charting, Graphing, Infographingတှသေုံးပွီး visual ပွသတဲ့ processဖွဈပါတယျ။
Data Modelingကတော့Complex dataတှကေို predictive and actionable informationတှအေဖွဈပွောငျးပေးတာပါ။
Raw Data တှကေို Formatလုပျတာတှေ Restructuringပွနျလုပျတာတှေ မိမိ အလုပျနဲ့ကိုကျညီတဲ့အထိလိုအပျ သလောကျ ပွနျလုပျတဲ့ processဖွဈပါတယျ။Data Scientistတှကေတော့ သူတို့ အလုပျတှအေတှကျဒီအဆငျ့မှာ 50က နေ 80 ရာခိုငျနှုနျးလောကျအထိ အခြိနျယူကွပါတယျ။
Computer တဈလုံးထဲမှာပဲ သိမျးထားလို့မရတဲ့ large amount of dataတှပေါ။data အမြိုးမြိူးပါဝငျပွီး Sqlတို့ Excelတို့လောကျနဲ့တော့ handleလုပျလို့မရနိုငျပါဘူး။
DS လုပျငနျးစဉျတှနေဲ့ problem solving လုပျမယျဆိုရငျ Algorithmတှကေမဖွဈမနသေုံးရပါတယျ။ဒါ့အပွငျ data science သမား တဈယောကျဟာ သူ့ လကျရှိ အလုပျနဲ့ သငျ့တျောတဲ့ algorithmကို အကောငျးဆုံး ရှေးခယျြ သုံးတတျရပါတယျ။Algorithmတဈခုထဲနဲ့ အလုပျအကုနျလုံးလုပျဖို့ကတော့ အဆငျမပွနေိုငျပါဘူး။
Data တှဆေီကနေ feedbackတှအေခွခေံပွီး ကိုယျပိုငျ behaviors တှေ ထိနျးညှိနိုငျတဲ့ တနညျး learningပွနျလုပျနိုငျတဲ့Computational processပဲဖွဈပါတယျ။
Machine learningရဲ့ အခှဲဖွဈပွီး neurons တှေ neural networksတှေ လူအတှေး‌‌တှကေို brain system အတိုငျး တုပ နိုငျဖို့ ကွိုးစားတဲ့ computational processပဲဖွဈပါတယျ။
Eg. Speech Recognition, Translation, Image Recognition
Labeled dataတှကေို အသုံးခပြွီး models‌တှကေို label Identifyလုပျလို့ရတဲ့အထိ trainယူရတယျ့ processပဲဖွဈပါတယျ။
Unlabeled dataတှသေုံးပွီး modelsတှကေို train ယူတဲ့ processဖွဈပါတယျ။labeledမဟုတျတော့ algorithmက ဘယျdataက ဘယျlabelဆိုတာ ခှဲခွားမှာမဟုတျပါဘူး။ဒါပမေယျ့ characteristicsတှကွေညျ့ပွီး dataတှကေို groupတှေ အနနေဲ့တော့ခှဲခွားပေးနိုငျပါတယျ။
Modelsကို past error တှကေနေ learning လုပျစပွေီး တဖွညျးဖွညျး နဲ့မှနျအောငျ ပွငျပွီး learning လုပျသှားတဲ့ processပဲဖွဈပါတယျ။
Data Analytics နဲ့ပတျသကျပွီး ဆကျလကျလလေ့ာမယျဆိုရငျတော့ အဓိကကတြဲ့ အခွခေံအခကျြ (၅)ခကျြကို လလေ့ာကွရအောငျ။
၁။ အခကျြအလကျတှေ အားလုံးဟာ အမြားအားဖွငျ့ သနျ့စငျမနပေါဘူး။
Data Analytics သငျတနျးမှာတော့ အခကျြအလကျတခြို့ အတညျပွုဖို့လိုအပျပွီဆိုရငျ "သီအိုရီမြား" ဆီသို့ခညျြးကပျရငျး အခကျြအလကျတှေ မေးမွနျးဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ လကျတှလေု့ပျငနျးခှငျမှာတော့ အဲ့လိုမဟုတျပါဘူး။ အဖှဲ့အစညျးတျောတျောမြားမြား ကွုံတှရေ့တဲ့ပွဿနာကတော့ "အခကျြအလကျမှားယှငျးဖွညျ့သှငျးခွငျးနဲ့ မဖွညျ့သှငျးထားခွငျး" မှအပ "ကောကျခံရယူထားတဲ့ Data Sets" တှကေို တဈခုတညျးအဖွဈသို့ ပေါငျးစပျကွခွငျးဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီလိုပေါငျးစပျရာမှာ တခြို့ Data Sets တှဟော လုံးဝကိုပေါငျးစပျမရတတျတာမြိုးကွောငျ့ မှားယှငျးတဲ့အခကျြအလကျတှဖွေဈလာပါတယျ။
Data ကောကျခံခွငျးဆောငျရှကျတဲ့စီးပှားရေးလုပျငနျးတှကေတော့ Front-End ကောကျခံတဲ့ Software တဈခုရယျ၊ ရလာဒျတှကေို စီစဈရတဲ့ အသုံးပွုသူတဈယောကျရယျပဲ ပါဝငျတတျပါတယျ။ ကောကျခံထားတဲ့အခကျြအလကျတှကေို Data scientist လာရောကျယူခြိနျမှာတော့ လှတျလပျစှာဖွညျ့သှငျးထားတဲ့အခကျြအလကျမြားသာဖွဈပွီး Data Design မှာ မပါဝငျတဲ့အရာမြားသာဖွဈနပေါတယျ။
၂။ Data ကောကျခံခွငျးဟာ အသုံးပွုသူကိုယျတိုငျက တခြို့အခကျြအလကျတှကေို Manually ဖကျြပေးဖို့လိုပါတယျ။
Data Analytics အကွောငျး လူတှတေျောတျောမြားမြား အထငျမှားနကွေတဲ့အရာက ဘာလဲဆိုတာ သိကွလား? Data Analytics Tools တှကေ ထညျ့သှငျးထားတဲ့ Data တှကေို စီစဈရလာတဲ့ ရလာဒျဟာ သနျ့စငျတယျလို့ ထငျနတောပါပဲ။
တကယျတော့ တခြို့အခကျြအလကျတှဟော မှားယှငျးဖွညျ့သှငျးထားတာမြိုး၊ ရညျရှယျထားတဲ့ သီအိုရီကိုသှဖေယျတာမြိုးဖွဈစတောဆို အသုံးပွုသူက Manually ဖကျြပေးဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အဲ့ဒီလိုပွုလုပျပေးရခွငျးကလညျး အခြိနျကုနျ၊ လူပငျပနျးဖွဈစလေို့ တျောတျောမြားမြားက မလုပျတတျကွပါဘူး။
၃။ အခကျြအလကျအမြားကွီးတှဆေိုတာ စငျစဈ ကိရိယာတဈမြိုးသာ ဖွဈပါတယျ။ လူတျောတျောမြားမြားက "အခကျြအလကျအမြားကွီး" စုဆောငျးမိထားကွတာကို နှဈသကျကွပါတယျ။
အဲ့ဒီအခကျြအလကျအမြားကွီးဆိုတာက သငျ့ရဲ့လုပျငနျးပွဿနာကို မဖွရှေငျးပေးနိုငျသေးပါဘူး။ Data ကောကျခံတဲ့ Software က အျောတိုကောကျခံပေးထားခွငျးသာ ဖွဈပါတယျ။ အဲ့အခကျြအလကျအကွီးတှကေို လကျတှအေ့သုံးခနြိုငျဖို့ စီစဈတဲ့ကိရိယာအဖွဈ ပညာရှငျတဈယောကျနဲ့ အတှအေ့ကွုံမြားတဲ့ မကျြစိတဈစုံလိုအပျပါတယျ။
၄။ ရလဒျသညျသာ ပဓာန
Executives နဲ့ Decision Making ပိုငျးက လူတျောတျောမြားမြားက Data Science ရဲ့ အဓိကအသုံးပွုသူဖောကျသညျတှဖွေဈပါတယျ။ သူတို့က သငျကောကျခံထားတဲ့အခကျြအလကျတှဟော ဘယျလိုဘယျဝါရလာတာထကျ အဲ့အခကျြအလကျတှကေို ဘယျနရောမှာအသုံးခလြို့ရမယျဆိုတာကို ပိုပွီးစိတျဝငျစားတတျကွပါတယျ။
၅။ Presentation က အဓိကပါပဲ။
စီစဈကောကျခံထားပွီးရလာတဲ့ အဖွကေို ဝယျယူမညျ့သူတှကေ သင်ျခြာပညာရှငျတှမေဟုတျပါဘူး။ သကျဆိုငျရာနယျပယျက ပညာရှငျတှပေါ။ သူတို့ကို "ဘယျလိုနညျးစနဈနဲ့ကောကျခံတယျ၊ ဘယျလိုတှကျထုတျတယျ" ရှငျးပွတာထကျ အသုံးပွုမညျ့သူ နားလညျလှယျအောငျအဓိကထားပွီးရှငျးပွသငျ့ပါတယျ။
Ref: ET (Data Science)
Data Analytics ဆိုသည်မှာ
Data Analytics ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Data Science ပဲ ဖြစ်ပါစေ "ဆယ်စုနှစ် (နှစ်) ခုလောက်" ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရပြီဖြစ်လို့ Data ကောက်ခံခြင်းနဲ့ စိစစ်တွက်ထုတ်ခြင်းနည်းစနစ်များ၊ Software များ၊ Application များ တရှိန်ထိုး တိုးတက်လာခဲ့ပါပြီ။
Data Analytics ဆိုတာဟာ စီးပွားရေးရည်ရွယ်ချက် (တိုးချဲ့၊ ရပ်တည်)၊ သိပ္ပံပညာအချက်အလက်များစုစည်းလိုသည့်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် "အချက်အလက်ကောက်ခံစီစစ်ထုတ်နုတ်ခြင်း" ဖြစ်သည်။ ၂၁ ရာစုနှစ်မှာတော့ Data Analytics အလုပ်ကို သင်္ချာပညာရှင်များ၊ အင်ဂျီနီယာပညာရှင်များ၊ စာရင်းကိုင်များနဲ့ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်တို့ ပိုမိုဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေကြပါပြီ။
ကောက်ယူထားတဲ့ အချက်အလက် Data များပေါ်မူတည်ပြီး Decision မျာချခြင်း၊ ပြသနာများဖြေရှင်းခြင်း၊၊ အဖြေတွက်ထုတ်ခြင်းများ အစရှိသဖြင့် အထောက်အပံ့ပေးနိုင်တဲ့ ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် ဒီနေ့ခေတ်မှာ ပိုမိုခေတ်စားလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
Data Analytics ပြုလုပ်ရာတွေ ထိုပညာရှင်များမှာ သူတို့နယ်ပယ်ဆိုင်ရာ Analytics Tools များကိုသာ အသုံးပြုတတ်ကြသည်။ ဒါကြောင့် အနာဂတ်အလုပ်အကိုင်ရည်မှန်းချက်ဖြင့် အခုခေတ်လူငယ်တို့ Data Analytics သင်တန်းများကို ကြိုတင်တက်ရောက်လေ့လာထားသင့်နေပါပြီ။
Data Analysis လို့ဆိုတာနဲ့ အခြေခံအားဖြင့်
(12) Reinforcement Learning ဆိုတာတွေကို အရင်ဆုံး နားလည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Structured data တွေ ဖြစ်ပြီး analysisလုပ်ရာမှာ အသုံးပြုနိုင်အောင် စီစဉ်ထားရှိထားတဲ့ data collection setတွေဖြစ်ပါတယ်။
Data Scientistတွေလုပ်လေ့ရှိတဲ့ Data set တွေထဲကနေ အသုံးပြုလိုရလောက်မယ့် usable modelsတွေ ရှာဖွေခြင်း processတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အတွက်လဲ techniques အမျိုးမျိုးကိုသုံးပါတယ်။eg. Regression, Classification, Cluster Analysis , Outlier Analysis...
ရရှိထားတဲ့Dataနဲ့ Informationတွေကို Charting, Graphing, Infographingတွေသုံးပြီး visual ပြသတဲ့ processဖြစ်ပါတယ်။
Data Modelingကတော့Complex dataတွေကို predictive and actionable informationတွေအဖြစ်ပြောင်းပေးတာပါ။
Raw Data တွေကို Formatလုပ်တာတွေ Restructuringပြန်လုပ်တာတွေ မိမိ အလုပ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အထိလိုအပ် သလောက် ပြန်လုပ်တဲ့ processဖြစ်ပါတယ်။Data Scientistတွေကတော့ သူတို့ အလုပ်တွေအတွက်ဒီအဆင့်မှာ 50က နေ 80 ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိ အချိန်ယူကြပါတယ်။
Computer တစ်လုံးထဲမှာပဲ သိမ်းထားလို့မရတဲ့ large amount of dataတွေပါ။data အမျိုးမျိူးပါဝင်ပြီး Sqlတို့ Excelတို့လောက်နဲ့တော့ handleလုပ်လို့မရနိုင်ပါဘူး။
DS လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ problem solving လုပ်မယ်ဆိုရင် Algorithmတွေကမဖြစ်မနေသုံးရပါတယ်။ဒါ့အပြင် data science သမား တစ်ယောက်ဟာ သူ့ လက်ရှိ အလုပ်နဲ့ သင့်တော်တဲ့ algorithmကို အကောင်းဆုံး ရွှေးချယ် သုံးတတ်ရပါတယ်။Algorithmတစ်ခုထဲနဲ့ အလုပ်အကုန်လုံးလုပ်ဖို့ကတော့ အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။
Data တွေဆီကနေ feedbackတွေအခြေခံပြီး ကိုယ်ပိုင် behaviors တွေ ထိန်းညှိနိုင်တဲ့ တနည်း learningပြန်လုပ်နိုင်တဲ့Computational processပဲဖြစ်ပါတယ်။
Machine learningရဲ့ အခွဲဖြစ်ပြီး neurons တွေ neural networksတွေ လူအတွေး‌‌တွေကို brain system အတိုင်း တုပ နိုင်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ computational processပဲဖြစ်ပါတယ်။
Labeled dataတွေကို အသုံးချပြီး models‌တွေကို label Identifyလုပ်လို့ရတဲ့အထိ trainယူရတယ့် processပဲဖြစ်ပါတယ်။
Unlabeled dataတွေသုံးပြီး modelsတွေကို train ယူတဲ့ processဖြစ်ပါတယ်။labeledမဟုတ်တော့ algorithmက ဘယ်dataက ဘယ်labelဆိုတာ ခွဲခြားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမယ့် characteristicsတွေကြည့်ပြီး dataတွေကို groupတွေ အနေနဲ့တော့ခွဲခြားပေးနိုင်ပါတယ်။
Modelsကို past error တွေကနေ learning လုပ်စေပြီး တဖြည်းဖြည်း နဲ့မှန်အောင် ပြင်ပြီး learning လုပ်သွားတဲ့ processပဲဖြစ်ပါတယ်။
Data Analytics နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆက်လက်လေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ အဓိကကျတဲ့ အခြေခံအချက် (၅)ချက်ကို လေ့လာကြရအောင်။
၁။ အချက်အလက်တွေ အားလုံးဟာ အများအားဖြင့် သန့်စင်မနေပါဘူး။
Data Analytics သင်တန်းမှာတော့ အချက်အလက်တချို့ အတည်ပြုဖို့လိုအပ်ပြီဆိုရင် "သီအိုရီများ" ဆီသို့ချည်းကပ်ရင်း အချက်အလက်တွေ မေးမြန်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာတော့ အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။ အဖွဲ့အစည်းတော်တော်များများ ကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာကတော့ "အချက်အလက်မှားယွင်းဖြည့်သွင်းခြင်းနဲ့ မဖြည့်သွင်းထားခြင်း" မှအပ "ကောက်ခံရယူထားတဲ့ Data Sets" တွေကို တစ်ခုတည်းအဖြစ်သို့ ပေါင်းစပ်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုပေါင်းစပ်ရာမှာ တချို့ Data Sets တွေဟာ လုံးဝကိုပေါင်းစပ်မရတတ်တာမျိုးကြောင့် မှားယွင်းတဲ့အချက်အလက်တွေဖြစ်လာပါတယ်။
Data ကောက်ခံခြင်းဆောင်ရွက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတော့ Front-End ကောက်ခံတဲ့ Software တစ်ခုရယ်၊ ရလာဒ်တွေကို စီစစ်ရတဲ့ အသုံးပြုသူတစ်ယောက်ရယ်ပဲ ပါဝင်တတ်ပါတယ်။ ကောက်ခံထားတဲ့အချက်အလက်တွေကို Data scientist လာရောက်ယူချိန်မှာတော့ လွတ်လပ်စွာဖြည့်သွင်းထားတဲ့အချက်အလက်များသာဖြစ်ပြီး Data Design မှာ မပါဝင်တဲ့အရာများသာဖြစ်နေပါတယ်။
၂။ Data ကောက်ခံခြင်းဟာ အသုံးပြုသူကိုယ်တိုင်က တချို့အချက်အလက်တွေကို Manually ဖျက်ပေးဖို့လိုပါတယ်။
Data Analytics အကြောင်း လူတွေတော်တော်များများ အထင်မှားနေကြတဲ့အရာက ဘာလဲဆိုတာ သိကြလား? Data Analytics Tools တွေက ထည့်သွင်းထားတဲ့ Data တွေကို စီစစ်ရလာတဲ့ ရလာဒ်ဟာ သန့်စင်တယ်လို့ ထင်နေတာပါပဲ။
တကယ်တော့ တချို့အချက်အလက်တွေဟာ မှားယွင်းဖြည့်သွင်းထားတာမျိုး၊ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ သီအိုရီကိုသွေဖယ်တာမျိုးဖြစ်စေတာဆို အသုံးပြုသူက Manually ဖျက်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်ပေးရခြင်းကလည်း အချိန်ကုန်၊ လူပင်ပန်းဖြစ်စေလို့ တော်တော်များများက မလုပ်တတ်ကြပါဘူး။
၃။ အချက်အလက်အများကြီးတွေဆိုတာ စင်စစ် ကိရိယာတစ်မျိုးသာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူတော်တော်များများက "အချက်အလက်အများကြီး" စုဆောင်းမိထားကြတာကို နှစ်သက်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီအချက်အလက်အများကြီးဆိုတာက သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းပြဿနာကို မဖြေရှင်းပေးနိုင်သေးပါဘူး။ Data ကောက်ခံတဲ့ Software က အော်တိုကောက်ခံပေးထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့အချက်အလက်အကြီးတွေကို လက်တွေ့အသုံးချနိုင်ဖို့ စီစစ်တဲ့ကိရိယာအဖြစ် ပညာရှင်တစ်ယောက်နဲ့ အတွေ့အကြုံများတဲ့ မျက်စိတစ်စုံလိုအပ်ပါတယ်။
၄။ ရလဒ်သည်သာ ပဓာန
Executives နဲ့ Decision Making ပိုင်းက လူတော်တော်များများက Data Science ရဲ့ အဓိကအသုံးပြုသူဖောက်သည်တွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က သင်ကောက်ခံထားတဲ့အချက်အလက်တွေဟာ ဘယ်လိုဘယ်ဝါရလာတာထက် အဲ့အချက်အလက်တွေကို ဘယ်နေရာမှာအသုံးချလို့ရမယ်ဆိုတာကို ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားတတ်ကြပါတယ်။
စီစစ်ကောက်ခံထားပြီးရလာတဲ့ အဖြေကို ဝယ်ယူမည့်သူတွေက သင်္ချာပညာရှင်တွေမဟုတ်ပါဘူး။ သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်က ပညာရှင်တွေပါ။ သူတို့ကို "ဘယ်လိုနည်းစနစ်နဲ့ကောက်ခံတယ်၊ ဘယ်လိုတွက်ထုတ်တယ်" ရှင်းပြတာထက် အသုံးပြုမည့်သူ နားလည်လွယ်အောင်အဓိကထားပြီးရှင်းပြသင့်ပါတယ်။